Cilmi-baaris Suuq-jaban oo Lagu Sameeyo Qalabka Suuqa | Martech Zone
Cilmi-baarista Suuqa ee La-Qiimeyn Karo Qalabka Suuqa
Isniin, Oktoobar 3, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Bishii la soo dhaafay Zoomerang ayaa ku soo biiray Martech Zone maadaama aan kafaala qaadayno tikniyoolajiyadda. Waxaan waqti fiican ku qaadanay inaan isticmaalno kuwooda qalabka sahanka fudud iyo, inta badan oo dhan, barashada sida loo qaabeeyo doorashooyinka iyo sahannada natiijooyinka soo saara. Waxay ahayd ilaa wareysigeenii aan la yeelanay dad weynaha kooxdooda in aan ogaanay in Zoomerang uu ka badan yahay xal sahan, in kastoo.
Shirkadda waalidka Qalabka Suuqa waxay bixisaa adeegyo nashqadeyn iyo fulin ah oo sahaminta ah. Uguyaraan $ 1499, akhristayaasha baloogyada Martech waxay ka faa'iideysan karaan adeegyada Qalabka Suuqa. Qalabka Suuqa wuxuu leeyahay in ka badan 2 milyan oo dad ah oo diyaar ah… waadna u kala qaybin kartaa labadaba tiro ahaan ama juqraafi ahaan! Taasi waa si macquul ah oo la awoodi karo Adeegyada Cilmi-baarista Suuqa!
Ku soo dhawow Email Suuq-geynta Blog Isboorti Delivra!